မေလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ အထူးထုတ် Mi 8 ကို မိတ်ဆက်မလား ? – DigitalTimes.com.mm
585 Shares 130 Views
မေလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ အထူးထုတ် Mi 8 ကို မိတ်ဆက်မလား ?
Ko Thuya May 30, 2018
Xiaomi က ယခုလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ Mi 8 , Mi Band3နဲ့ MIUI 10 တို့ကို မိတ်ဆက်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် ရှောင်မီက ၀ယ်ယူသူများအား မဲဖောက်ပေးမယ့် ကူပွန်မှ သတင်းအချက်အလက်အရ အထူးထုတ် Mi 8 ကိုပါ အဲဒီနေ့မှာ မြင်ရနိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အမည်မှာ Xiaomi Mi 8 SE ဖြစ်နိုင်ပြီး အထူးထုတ် ဆိုပေမယ့် သူဟာ Mi 8 ထက် စွမ်းရည်နိမ့်၊ တန်ဖိုးနည်း မော်ဒယ်ပါ။ သူ့မှာ Snapdragon 845 အစား Snapdragon 710 ကို သုံးထားနိုင်ပြီး4or 6GB RAM များ ထည့်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ သူ့မှာ Notch ပါပေမယ့် 3D Sensing စွမ်းရည်ကို ဖယ်ရှားထားမှာပါ။ အရှေ့ဘက်မှာ Mi 8 ရဲ့ 16MP ထက်ပိုမြင့်တဲ့ 20MP Camera ပါလာနိုင်ပါတယ်။
ရှောင်မီက ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်တာ ၈ နှစ်ပြည့်တဲ့ အထိမ်းအမှတ် ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုလည်း မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ ဗီဒီယိုမှာ Mi 8 ရဲ့ စွမ်းရည်များကို အရိပ်အမြွက်ပြသထားပါတယ်။ ဗီဒီယိုမှာ ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်၊ စာအုပ်စင်တို့ကို လက်နဲ့ ထိလိုက်တာနဲ့ ပွင့်သွားတာကို ပြသထားတာက မျက်နှာပြင်အောက် လက်ဗွေရာ အာရုံခံ ကိရိယာကို ညွှန်ပြတာပါ။ ထီးတစ်ချောင်းကိုလည်း ဗီဒီယိုမှာ ပြသထားတဲ့အတွက် ရေစိုခံ စွမ်းရည် ပါလာမှာပါ။ ဒါ့အပြင် ဗီဒီယိုမှာ စုံလင်တဲ့ အရောင်များ ပါရှိတဲ့အတွက် Mi 8 ကို အရောင်စုံထုတ်လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Mi 8 ရဲ့ ပေါက်ကြား သတင်း အချက်အလက်များကို ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Xiaomi Mi 8 မှာ ၆.၀၁ လက်မ မျက်နှာပြင် တပ်ဆင်ထားမှာ ဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်ရဲ့ အထက်မှာ Width ကျယ်တဲ့ Notch ပါရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ ရှောင်မီ ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားတဲ့ မျက်နှာဖြင့် ဖုန်းကို Unlock လုပ်တဲ့ 3D Sensors များ ပါလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Qualcomm Snapdragon 845 Chipset ပါလာမှာ သေချာသလောက်ရှိပါတယ်။
သူ့ကို မော်ဒယ် နှစ်မျိုးထုတ်လုပ်ပေးထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 6GB RAM/64GB Storage ကို ၄၄၀ ဒေါ်လာနဲ့ စွမ်းရည်မြင့် 8GB RAM/128GB Storage ကို ၅၀၀ ဒေါ်လာဖြင့် ရောင်းချမယ်လို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။ အဲဒီ ဖုန်းရဲ့ အနောက်ကင်မရာ နှစ်လုံးကိုလည်း ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာက ထောက်ကူပေးမှာ ဖြစ်ပြီး Scenes ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပါတယ်။ သူ့မှာ မတူညီတဲ့ Portrait Mode ၁၂ မျိုးလည်း ပါလာမှာပါ။ သူ့မှာ Quick Charge 4.0+ လည်း ပါလာမယ်လို့ Qualcomm က အတည်ပြုထားပါတယ်။
မလေ ၃၁ ရကျနမှေ့ာ အထူးထုတျ Mi 8 ကို မိတျဆကျမလား ?
Xiaomi က ယခုလ ၃၁ ရကျနမှေ့ာ Mi 8 , Mi Band3နဲ့ MIUI 10 တို့ကို မိတျဆကျမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ ရှောငျမီက ဝယျယူသူမြားအား မဲဖောကျပေးမယျ့ ကူပှနျမှ သတငျးအခကျြအလကျအရ အထူးထုတျ Mi 8 ကိုပါ အဲဒီနမှေ့ာ မွငျရနိုငျပါတယျ။ သူ့ရဲ့ အမညျမှာ Xiaomi Mi 8 SE ဖွဈနိုငျပွီး အထူးထုတျ ဆိုပမေယျ့ သူဟာ Mi 8 ထကျ စှမျးရညျနိမျ့၊ တနျဖိုးနညျး မျောဒယျပါ။ သူ့မှာ Snapdragon 845 အစား Snapdragon 710 ကို သုံးထားနိုငျပွီး4or 6GB RAM မြား ထညျ့ပေးထားနိုငျပါတယျ။ သူ့မှာ Notch ပါပမေယျ့ 3D Sensing စှမျးရညျကို ဖယျရှားထားမှာပါ။ အရှဘေ့ကျမှာ Mi 8 ရဲ့ 16MP ထကျပိုမွငျ့တဲ့ 20MP Camera ပါလာနိုငျပါတယျ။
ရှောငျမီက ကုမ်ပဏီ တညျထောငျတာ ၈ နှဈပွညျ့တဲ့ အထိမျးအမှတျ ဗီဒီယိုတဈခုကိုလညျး မြှဝလေိုကျပါတယျ။ အဲဒီ ဗီဒီယိုမှာ Mi 8 ရဲ့ စှမျးရညျမြားကို အရိပျအမွှကျပွသထားပါတယျ။ ဗီဒီယိုမှာ ဒိုငျယာရီ စာအုပျ၊ စာအုပျစငျတို့ကို လကျနဲ့ ထိလိုကျတာနဲ့ ပှငျ့သှားတာကို ပွသထားတာက မကျြနှာပွငျအောကျ လကျဗှရော အာရုံခံ ကိရိယာကို ညှနျပွတာပါ။ ထီးတဈခြောငျးကိုလညျး ဗီဒီယိုမှာ ပွသထားတဲ့အတှကျ ရစေိုခံ စှမျးရညျ ပါလာမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ ဗီဒီယိုမှာ စုံလငျတဲ့ အရောငျမြား ပါရှိတဲ့အတှကျ Mi 8 ကို အရောငျစုံထုတျလုပျထားနိုငျပါတယျ။
Mi 8 ရဲ့ ပေါကျကွား သတငျး အခကျြအလကျမြားကို ပွနျလညျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ Xiaomi Mi 8 မှာ ၆.၀၁ လကျမ မကျြနှာပွငျ တပျဆငျထားမှာ ဖွဈပွီး မကျြနှာပွငျရဲ့ အထကျမှာ Width ကယျြတဲ့ Notch ပါရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။ သူ့မှာ ရှောငျမီ ကိုယျတိုငျ ဖနျတီးထားတဲ့ မကျြနှာဖွငျ့ ဖုနျးကို Unlock လုပျတဲ့ 3D Sensors မြား ပါလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ Qualcomm Snapdragon 845 Chipset ပါလာမှာ သခြောသလောကျရှိပါတယျ။
သူ့ကို မျောဒယျ နှဈမြိုးထုတျလုပျပေးထားမှာ ဖွဈပါတယျ။ 6GB RAM/64GB Storage ကို ၄၄၀ ဒျေါလာနဲ့ စှမျးရညျမွငျ့ 8GB RAM/128GB Storage ကို ၅၀၀ ဒျေါလာဖွငျ့ ရောငျးခမြယျလို့ သတငျးထှကျနပေါတယျ။ အဲဒီ ဖုနျးရဲ့ အနောကျကငျမရာ နှဈလုံးကိုလညျး ဉာဏျရညျတု နညျးပညာက ထောကျကူပေးမှာ ဖွဈပွီး Scenes ပေါငျး ၂၀၀ ကြျောကို ခှဲခွမျးစိတျဖွာနိုငျပါတယျ။ သူ့မှာ မတူညီတဲ့ Portrait Mode ၁၂ မြိုးလညျး ပါလာမှာပါ။ သူ့မှာ Quick Charge 4.0+ လညျး ပါလာမယျလို့ Qualcomm က အတညျပွုထားပါတယျ။
၂၀၁၉ ထုတ် iPhone မှာ ကင်မရာ သုံးလုံးတပ် စနစ်ပါမည်
18:9 Display ပါတဲ့ တန်ဖိုးနည်း Nokia 5.1 ကို ကြေညာပြီ